अमेरिकी निर्वाचन र यसको असर – Dainik Lumbini
हालै सम्पन्न अमेरिकी निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराउँदै डेमोक्रेटिक पार्टीका उमेदवार जोसेफ रोबिनेट वाईडेन जुनियर(जो वाईडेन) अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिमा छनौट भएका छ्न् । उनको यो चुनावी जितपछि विश्व राजनीतिमा के कस्तो असर पर्दछ भनी त्यसको लेखा जोखा भइरहेको छ । अमेरिका विश्वको एक प्रमुख सम्पन्नशिल र धनि अनि शक्तिशाली राष्ट्र हो । निश्चय नै उसको हरेक असर तत्काल विश्वव्यापी नै पर्दछ । तर यो चुनावले वा पार्टी र व्यक्ति अदल बदलले खासै फरक पार्दैन । किन भने अमेरिका साम्राज्यवादी राष्ट्र हो । साम्राज्यवाद भनेको लुटेर प्रवृत्ति हो । न लुटी न ठगी न हडपी उनीहरु बाँच्ने स्थिति पनि हुन्न । त्यसकालागि उनीहरु जे गर्न पनि तयार भइरहेका हुन्छन् । साम दाम दण्ड भेद सबैको उनीहरुले प्रयोग गर्दछन् । त्यसकारण अमेरिकामा जुन पार्टी जुन नेता र व्यक्ति आएपनि खास फरक पर्ने वाला छैन । हुनतः साम्राज्यवाद परजीवी र मक्किएको पुँजीवादी अवस्था हो । लेलिनले भनेजस्तै साम्राज्यवाद पुँजीवादको चरम र मारोनसन्न अवस्था हो ।
यो अमेरिकी निर्वाचनमा जो वाईडेनको जितपछि अब नेपालमा केही आर्थिक अमेरिकी सहयोग बढ्ने अनुमान केहीको छ । किनभने राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपालमा यस्तो सहयोगको कटौती गर्दै आएका थिए । तर अब पनि नेपालले चाहे जति बढी सहयोग उनीबाट सम्भव छैन । किनभने माथि भनेजस्तै साम्राज्यवाद परजीवी र यसको स्रोत सबै लुटमा आधारित छ । अहिले यो लुट दिन प्रतिदिन घट्दो र खुम्चिँदै गईरहेको छ । त्यसमा पनि अब अहिले कोरोना भाइरसको कारणले अमेरिकी अर्थतन्त्र डामाडोल छ । आफै त महादेव उत्तानो भएपछि कसलाई दिने भर भनेजस्तै भइरहेको छ अमेरिका पनि । यस्तो अवस्थामा पनि नेपालमा अमेरिकी सहयोग बढी चाहने प्रवृत्ति भीकारी र मगन्ते सोचको उपज हो । कुनै कारण अमेरिकी सहयोग यहाँ भइहाले पनि त्यसका पछाडि त्यही अमेरिकी साम्राज्यवादी लुटेरा पनकै उपज देखिन्छ । जस्तो एमसीसी अमेरिकी परियोजना यसको एउटा उदाहरण छ । सहयोगको नाममा पुरै राष्ट्रलाई नै बन्दगी बनाइराख्नु राष्ट्रघाती काम हुनेछ ।
त्यस्तै यो अमेरिकि राष्ट्रपति चुनावमा जो वाईडेनको जितले हाम्रा थुप्रै नेपालीहरु बढी खुसी भएको देखिन्छ । ती एकथरी नेपाली जो नेपाली नागरिकता नै त्यागी अमेरिका गई बसेका छन् । उनीहरुका लागि अमेरिकाबाट हटाइने सम्भावना अब छैन । किनभने राष्ट्रपति ट्रम्पले पटक–पटक यस्ता विदेशी नागरिकहरूलाई अमेरिकाबाट हटाउने चेतावनी दिइरहेका थिए । थुप्रैको भिसा बन्द र ग्रीन कार्ड बढाउन नै रोक लगाएका थिए । यसमा डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताहरु केही उदाहरण हुने उनीहरूको विश्वास छ । तर जो वाईडेन यसमा अहिले केही उदार जस्तो देखिएपनि अमेरिकामा आप्रवासी समस्या एकदमै बिकराल छ यसबाट स्वयं अमेरिकी तल्लो वर्गका जनता पीडित छन् । थुप्रै त्यहाँ बेरोजगार भइरहेका छन् । कोरोना भाइरसको कारणले अहिले मात्र त्यहाँ थुप्रो कलकारखाना बन्द भई लाखौ मजदुरहरु काम नपाए बेरोजगार भएका छन्। यस्तो स्थितिमा यसरी त्यहाँ विदेशीहरुलाई खुल्लमखुल्ला रोजगार दिई आफ्ना स्वदेशी नागरिकहरूलाई बेरोजगार गराई राख्नु जो वाईडेनका लागि पनि त्यति सजिलो छैन । हुनपनि विश्वका लाखौं लाख यस्ता भगौडाहरुलाई शरण दिई व्यवस्थापन गराउँदा त्यहाँका खास नागरिकहरू असन्तुष्ट हुनु स्वभाविक नै छ। जुन मत राष्ट्रप्रति ट्रम्पले पाए यो यसैको परीणाम हो। अमेरिकी नयाँ राष्ट्रवादलाई ट्रम्पले त्यहाँ राम्रोसँग उजागर गराइसकेका छन् । यसविरुद्ध जानु जो वाईडेनका लागि फलामका चिउरा चपाउनु जस्तै कठिन हुनेछ ।
केही नेपालीहरु त्यसमा पनि युवायुवतीहरु जो वाईडेनको यो जीतबाट खुशी हुनुको एउटा कारण हो ।अब पुनः डीबी खुली अमेरिका जान र बस्न पाइने भयो । देशमा रोजगारी भएकाले विदेशमा रोजगारीकोलागि जानुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन तर नेपाली नागरिकता नै पूर्ण रुपले परित्याग गरी त्यहाँ सदाका लागि जानु भनेको आफ्नो मातृभूमि प्रतिको अनादर हो । तैपनि यो त्यति सजिलो छैन किनभने माथि नै भनियो अब स्वयं अमेरिकी नागरिकहरु नै दिन प्रति दिन बेरोजगार हुँदैछन् । अमेरिकी डिभी भनेको विश्व साम्राज्यवाद फैलाउनका लागि चालिएको पहिलो कदम हो भने अर्को आफ्नो राष्ट्रको बढ्दो शोषणमा आधारित मजदूरी समस्या पनि हो । तेस्रो विश्वका लाखौं बेरोजगार युवायुवतीलाई सस्तो ज्यालामा भित्राई उनीहरूको श्रम शोषण गर्ने पनि हो । तर यी दुवै पनि अब त्यति सम्भव देखिँदैन । एक विश्व साम्राज्यवादको विकल्पमा अब दुई वा बहु साम्राज्यवादको उदय भइसकेको छ । एकल अमेरिकी साम्राज्यवादको विकल्पमा चीन तथा रूसी साम्राज्यवादको उदय भइसकेको छ ।
यो अमेरिकी निर्वाचनले एउटा सत्यता र यथार्थलाई राम्रो सँग प्रकट गरेको छ । यो हो बुर्जुवा संसदीय निर्वाचनको असली चरित्र जुन– धनदौलत, गुण्डागर्दी, धाधली र षड्यन्त्रमा आधारित छ । अमेरिकाजस्तो अति उन्नत प्रजातन्त्र भएको भनिने मुलुकमा पनि त्यस्तो धाधली पूर्ण हुँदो रहेछ ? यो निर्वाचनले प्रकट गरेको छ । जुन बहालवाला राष्ट्रपति नै उक्त निर्वाचनमा धाँदली भएको भन्दै अदालतको शरणमा पुगेका छन् । त्यस्तो उन्नत आधुनिक टेक्नोलोजीका साधन सम्पन्न मुलुकमा त यस्तो हुदोरहेछ भने अझ हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्तो संसदीय निर्वाचन कस्तो हुँदै आएको छ र अब हुन्छ ? सोतः स्पष्ट छ ।
अन्त्यमा राष्ट्र र विश्व हाक्ने कुरा एउटा लहड र संकी स्वभावले सम्भव छैन । डोनाल्ड ट्रम्पको यो निर्वाचन हारले त्यो पुष्टि गरेको छ।हुनत विश्वको राजनीति नै यस्तै संकि र लहडीहरूको भरमा चल्दै आइरहेको छ । तर यसमा केही ब्रेक यो अमेरिकी निर्वाचनले लगाउने गरेको छ । नेपालका चुनावी नेताहरूले अनि यो याद गर्नु । उखान–टुक्का भनेर राजनीति र शासन सत्ता चल्दैन , न कुनै जालझेल र षड्यंत्रले नै राजनीति हुन्छ । राजनीतिमा ठूलो त्याग तपस्या र बलिदान अनि नैतिकता र इमान्दारिता चाहिन्छ । तर दुःखको कुरा सामान्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्यसत्ताको मूल विशेषता नै यही हो ।
सार्वजनिक जग्गामाथि किन यो विवाद